० तपाईँहरु पार्टी निर्णयविपरित जान खोजेको हो ?
० पार्टीले त अब निर्वाचनमै जाने भनेर लिखित निर्णय गरिसकेको अवस्था हैन र ?
हामीले निर्वाचनमा नजाने भनेका छैनौं, निर्वाचनमा जान विधि पु�याएर जाने भनेका मात्र हौं । संसद पुनस्र्थापना नगरी निर्वाचनमा जान नसकिने हाम्रो भनाई हो । यो कुरा निर्वाचन आयोगले भनेको कुरा हो । बाबुराम भट्टराईले अवैधानिक रुपमा गरेको चुनावी घोषणा बेवारिसे अवस्थामा रह्यो । यदि संविधान संशोधन नगरी चुनावमा जाने भन्ने हो भने त्यो पनि बेवारिसे नै हुन्छ । संविधान संशोधन गरेर चुनावमा जाने हो । अध्यादेशबाट संविधान संशोधन सम्भव छैन ।
० अनि यो ७८ जनामा शिर्ष नेताहरु पनि हुनुहुन्छ ?
७८ जना बाहेक पुनस्र्थापनाको पक्षमा रहेका नेताहरुमा शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल, प्रकाशमान सिंह, गोपालमान श्रेष्ठ, डा. प्रकाशशरण महत, रमेश लेखक, बालकृष्ण खाँड, लक्ष्मणप्रसाद घिमिरे, बिमलेन्द्र निधिलगायतका थुप्रै नेताहरु छन् । सबै गरेर झण्डै ९५�९६ जना नेता तथा पूर्व सभासद पुनस्र्थापनाको पक्षमा हुनुहुन्छ ।
० कतै पार्टी नेतृत्वमा निर्वाचनमा पराजित भएकाहरुको बाहुल्यताले गरेको निर्णय पो हो कि ?
संविधान सभामा पराजित भएर संविधान सभामा सदस्य नभएका केही नेता तथा केन्द्रीय सदस्यहरु, देशको संकट समाधान गर्ने कुरा भन्दा पनि आफ्नो स्वार्थको केन्द्रमा राखेर अगाडि बढ्न खोजेको देखिन्छ ।
० तर, उनीहरुले नै तपाईंहरुलाई फेरि मनोनयनमा नपर्ने र चुनाव पनि नजित्ने भएपछि पुनस्र्थापनामा जोड दिएको आरोप लगाएका छन् नि ?
त्यो त जनतामा गइसकेपछिको कुरा हो । चुनावको कुरा गर्ने, तर उनीहरु नै चुनाव नभए हुन्थ्यो भन्ने चाहन्छन् । हामी चुनावकै पक्षमा हौं । तर, चुनाव पनि संविधानसभा पुनस्र्थापना गरेर मात्रै हुन्छ भन्ने हो । ० कानुनी अडचनले गर्दा निर्वाचनमा जाने भएपनि संविधान संशोधन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा तपाईंहरुको होला । तर, सर्बोच्च अदालतले पनि बाधा अड्काउ फुकाउन राष्ट्रपतिलाई अधिकार दिएको सन्दर्भमा पूनस्र्थापनाकै अडान त ठिक भएन कि ? होइन बाधा अड्काउ फुकाउ अन्तरिम संविधानको धारा १५८ मा यो संविधानको कार्यन्वयन गर्न केही कुराहरु अप्ठ्यारो प�यो भने मात्रै हो, संविधानमा हुँदै नभएको विषयमा नयाँ धारा बनाएर बाधा अडकाउ फुकाउन असम्भव छ । यो असंवैधानिक हुन्छ । ० अन्तरिम संविधानमा संविधान सभा फेरि पुनस्र्थापना गर्ने कानुनी प्रावधान नै छैन नि ? पहिलो कुरा धारा ८२ ले संसदको शुन्यताको परिकल्पना गरेको छैन । अर्को संसदको निर्वाचन नभएसम्मका लागि संविधान सभा रहन्छ भनिएको छ । दोस्रो कुरा म्याद नसकिँदै यसको हत्या गरियो त्यसकारण त्यो बाँकी रहेको छोटो समयलाई उपयोग गर्न सकिए पुनस्र्थापना गर्न सकिने प्रशस्त सम्भावना छ । ० त्यसो भए कसले, कसरी, कुन प्रावधानबाट पुनस्र्थापना गर्ने त ?
मेरो भनाई त संविधानको मर्म भावनाअनुसार संसद छ भन्छु । धारा ८२ लाई राम्रोसँग हेर्ने हो भने अर्को चाहिँ लिग भन्दा बाहिर गएको कुरालाई संविधान सभाको बाँकी रहेको आधा घन्टामा पनि बैठक बोलाएर व्यवस्थापिका संविधान संशोधन गरेर पुनस्र्थापना गर्ने प्रशस्त सम्भावना छ ।
० धेरैले त के भन्न थालेका छन् भने ०४७ सालमा खारेज भएको संविधानलाई टेक्न खोजिएको हो र केही कांग्रेसी पहिलेदेखि उक्त संविधान ब्यँुताउन खोजिरहेका छन् भनिन्छ नि ?
होइन समय धेरै अगाडि बढिसकेको छ । त्यसकारण पछाडि फर्कने सम्भावना रहँदैन । सकारात्मक सम्भावनातिर लाग्नुपर्छ । ० संविधान सभाको हत्या भएको पाँच महिना बितिसक्यो अब निर्वाचनमा जाने कि संसद पुनस्र्थापनामा जाने लामो बहस भइरहँदा देश अनिर्णयको बन्दी भइरह्यो नि ?
होइन, निर्वाचन कि पुनस्र्थापना भन्ने कुरा होइन, निर्वाचनमै जाने हो । तर, त्यसको लागि पुनस्र्थापना गरेर मात्रै निर्वाचनमा जाने भन्ने कुरा हो । हामी निर्वाचनमा नजाने भनाई होइन । हामी निर्वाचनमै जाने हो । ० कति समयका लागि संसद पुनस्र्थापना हुनुपर्छ ? कम्तिमा एक घन्टा पुनस्र्थापना हुनुपर्छ, नभइकन संवैधानिक बाटो फुक्दैन । ० एक घन्टा मात्रै भए पुग्छ ?
पुग्छ भन्ने कुरा होइन कि कमसेकम पुनस्र्थापना भएपछि संविधान संशोधन गर्नलाई २�५ दिनको समय भए पनि पुग्छ । ० फेरि यसरी लम्बिदै गयो भने नि ?
होइन, दुनियाँमा केही पनि एउटा जनप्रतिनिधि निकायले एउटा प्रतिबद्धता गरेको हुन्छ । लोकतन्त्रमा जनताले शासन गर्ने कुरा हुन्छ । यसरी जनतासमक्ष झुट बोलियो भने जनताले आवधिक रुपमा ऐन मौकामा सजाय दिने छन् । त्यसकारण जनतासमक्ष झुट बोल्नु हुँदैन । जनतालाई सजाय दिने अधिकार सुरक्षित छ ।
० ७८ जनाको लिखित माग नै आइसकेको र केही नेताहरुको नाम लिँदाखेरि ८० प्रतिशत भन्दा बढी सभासदको संख्या देखिने भयो, हैन ?
हेर्नुस् ८० प्रतिशतभन्दा बढी सभासद पुनस्र्थापना गरी संविधान संशोधन गर्दै निर्वाचनमा जानुपर्ने पक्षमा छन् ।
० नेपाली कांग्रेस चुनावदेखि भाग्न खोजेको त हैन ?
पाँच महिनामा पुनस्र्थापनामा सहमति जुटाउन सकिएन भन्दै पुनस्र्थापनाको ढोका बन्द गरियो भनेर केही नेताहरुले भन्छन् । यदि त्यसो भन्दै निर्वाचन बैशाखमा हुने कांग्रेसले भनेको छ । यदि निर्वाचन बैशाखमा भएन भने निर्वाचनको ढोका बन्द गर्ने हो त ? होइन । जुन वैधानिक विकल्प छ । त्यसमा अगाडि बढ्नुपर्छ । यसलाई हामी अझै छलफल र वार्ता गरिरहेका छौं ।
० यस्तो निष्कर्षविहीन वार्ता र छलफल कहिलेसम्म ?
हामी वार्तामै विश्वास गर्ने हो, लोकतन्त्र भनेको वार्ता र छलफलमा विश्वास गर्नै सैद्धान्तीक आधार हो । त्यसैले आफ्ना कुराहरु जनतामा राख्दै सार्वजनिक गर्दै वार्ताले अगाडि बढाइरहने छ ।
Posted on:November 2, 2012, 7:20 am
Отправились в отпуск, и занемог ребенок, а денег маловато. Без усилий получили ссуду онлайн, на кредитную карту пришли денюжка мгновенно.Вернули через недельку уже дома. Никаких справок либо поручителей. Нужен только лишь телефон и кредитка с которой можно забрать всю ссуду буквально через несколько минут после одобрения заявки. Выручали подобные быстрые наличные и родственников, когда знакомому необходимо было немедленно проплатить экзамен. Никому не надо объяснять, унижаться и вымаливать. Лично выбираешь сумму и период отдачи. Рекомендую всем, кто оказался в трудной ситуации.
kfykema viagra 6809 buy viagra online tyAxgH generic cialis JWmpJ online cialis >:-[
asoyan payday loans 2998 payday loans 1579 payday loans >:]] payday uk =-] payday loans >:-[
nkycmg money mutual uverCS payday loans 5782 payday loans 4633